Archives Vietnam " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Asia » i Vietnam
Vietnam. Mandehandeha manodidina an'i Vietnam. Hitan'ny olona. Ny tena mahaliana. Aiza no haleha. Fanadihadiana, sary, famaritana toerana mahaliana. Sarintany misy morontsiraka sy manintona
Views: 530 Sarintany ifandrimbonana mahasarika Vietnam sy ny morontsiraka 10 fisarihana mahaliana ao amin'ny tanànan'ny tanànan'i Ho Chi Minh Lisitry ny atiny Ho Chi Minh City, Saigon teo aloha, no tanàna lehibe indrindra ao Vietnam ary mifangaro efa ela sy vaovao. Ohatra, ny mpitsidika an'ity tanàna ity dia hahita toeram-pivarotana kanto sy tsena efa taloha be feno fivarotana mivarotra karazana asa-tanana eto an-toerana sy manangoly ...
Fijery: Sarintany 457 misy ifandraisany amin'ny zaridainan'i Vietnam sy ny morontsiraka Top 10 Zavatra tokony hatao any Sapa, Vietnam Lisitry ny atiny Sapa dia tanàna kely iray any avaratry Vietnam, eo afovoan'ny lohataona misy lohasaha midadasika feno velaran-tanety sy tendrombohitra manodidina. Izany no atao hoe miaina 1500 metatra ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Tanànan'i Sapa Tanin'ny tanimbary mahatalanjona ao amin'ny tanànan'i Sapa Raha ...
Views: 462 Sarintanin'ny Interactive of Vietnam atraksyon sy morontsiraka 11 Tojo zavatra manintona indrindra ao amin'ny Halong Bay Lisitry ny atiny Iray amin'ireo toerana malaza sy malaza hitsidika an'i Vietnam ny Halong Bay. Manana nosy karst 2000 sy nosy kely ho anao izy izao. Na inona na inona ampidinao amin'ny lisitry ny hetsika ao Halong Bay, azonao atao ...
Views: 460 Sarintanim-pifandraisana mifandraika amin'ny fisarihana Vietnam sy ny morontsiraka 12 Zavatra mahaliana indrindra tokony hatao any Nha Trang, Vietnam Lisitry ny votoatiny Ny tanàna fialan-tsasatra malaza any Vietnam - Nha Trang dia malaza amin'ny mpizahatany eto an-toerana sy avy any ivelany. Mora ny mahita ny antony, satria ny morontsirak'ireo fasika mahafinaritra dia tsy mijery ny bay tsara tarehy misy nosy idyllic lavitra. Any amin'ny atsimo-afovoany ...
Views: Sarintany 549 mifandraika amin'ny fahitana any Vietnam sy ny morontsiraka 10 Toerana mahatalanjona azo tsidihina ao Hue, Lisitry ny atiny Vietnam Any amoron'ny Ony Perfume, tanàna mahafinaritra hitsidihana i Hue. Betsaka ny zavatra azo jerena sy atao eto. Amin'ny maha renivohitr'i Vietnam teo aloha azy, rakotry ny tantara izy, ary i Hue dia malaza indrindra amin'ny fasana mahafinaritra an'ny amperora teo aloha niparitaka ...